Otu esi eme nkwalite gaa na AlmaLinux 8.5 - LinuxCapable
Otu esi ebuli gaa na AlmaLinux 8.5
November 14, 2021 November 11, 2021 by Jọshụa James
Bubata ebe nchekwa 8.5 kacha ọhụrụ
Nweta nkwalite gaa na AlmaLinux 8.5
AlmaLinux 8.5 bụ n'ikpeazụ ebe a ma aha ya bụ Arctic Sphynx. Ụdị ọhụrụ nke AlmaLinux 8.5 na-abata juputara na ọtụtụ nkwalite dị ka Nginx 1.20, Node.js 16, Ruby 3.0, PHP 7.4.19, na ọtụtụ ndị ọzọ modul iyi na nkwalite. Agụnyere bụ ihe njikwa webụ Cockpit emelitere yana nkwado maka OpenJDK 17 ewepụtara na nso nso a.
N'ime nkuzi a, ị ga-enweta a Ngagharị ụkwụ site n'ọzọ iji kwalite sistemụ AlmaLinux 8.4 dị adị na 8.5.
Mbụ, mepee ọnụ ọnụ gị ma hichaa ngwugwu ọ bụla na-adịghị adị tupu ibubata ebe nchekwa ọhụrụ iji wụnye 8.5-1.el8.
Mara, mmepụta gị ga-adị iche.
Na-esote, bubata ebe nchekwa 8.5 kacha ọhụrụ.
Maka ndị ọrụ x86_64:
Maka ndị ọrụ arch64:
Pịnye Y, pịa pịa Tinye igodo ịga n'ihu na mbubata ebe nchekwa ahụ.
Site na ebe nchekwa ahụ agbakwunyere ugbu a, malite usoro nkwalite gaa na 8.5-1.el8.
Na njedebe gị, mee ihe ndị a.
Dịka n'elu, ị nwere ike ịhụ ndepụta ngwungwu zuru oke nke a ga-ebuli elu, tinye ya ma wepụ ya.
Dabere na ngwaike gị, akụrụngwa yana njikọ ịntanetị, nkwalite ahụ nwere ike were ọtụtụ nkeji.
Ozugbo emechara nkwalite ahụ, ị ​​ga-emerịrị sistemụ gị. Mgbe ị nọ na ọdụ ụgbọ elu gị, mee ihe ndị a.
Ozugbo ịbanye, mepee ọnụ ọnụ gị wee jiri iwu na-esonụ iji nyochaa ụdị nke AlmaLinux arụnyere.
Dịka n'elu, ị kwalitela nke ọma na ntọhapụ ọhụrụ ahụ.
N'ime nkuzi a, ị mụtala otu esi emelite AlmaLinux 8.5. N'ozuzu, ntọhapụ ka dị na ọnọdụ. N'agbanyeghị nke ahụ, ọ bụrụ na ị kwalite ma zute nsogbu, ị nwere ike ịkọ akụkọ ahụ na ya AlmaLinux Bug Tracker, na enwere ike ịchọta ozi ndị ọzọ na Akwụkwọ mgbanwe Wiki AlmaLinux 8.5.
Categories AlmaLinux Tags AlmaLinux Mail igodo
Otu esi etinye Nginx na Fedora 35